Fizahana asa - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ny tabila rehetra dia hosedraina 100% amin'ny asa ao amin'ny orinasa Fumax. Ireo fitsapana dia hatao araka ny fomba fitiliana ny mpanjifa.
Ny injeniera famokarana Fumax dia hanangana fitaovana fitsapana ho an'ny vokatra tsirairay. Ny fitaovana fanandramana dia hampiasaina hizaha toetra ny vokatra mahomby sy mahomby.
Hisy tatitra momba ny fanandramana hatao isaky ny fitiliana, ary zaraina amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny mailaka na rahona. Ny mpanjifa dia afaka mandinika sy manara-maso ireo firaketana fanandramana rehetra amin'ny valin'ny Fumax QC.
FCT, fantatra koa amin'ny hoe Functional test, amin'ny ankapobeny dia manondro ny fitsapana aorian'ny famoahana ny PCBA. Ny fitaovan'ny automation FCT dia mifototra amin'ny famolavolana rindrambaiko misokatra sy rindrambaiko misokatra, izay afaka manitatra mora foana ny fitaovana ary mametraka haingana ny fomba fitiliana. Amin'ny ankapobeny dia afaka manohana fitaovana marobe izy io ary azo alamina tsara amin'ny fangatahana. Tokony hananana tetik'asa fanadinana fototra manankarena ihany koa izy io hanomezana ny mpampiasa vahaolana iraisana, malefaka ary manara-penitra araka izay tratra.
1. Inona no ampidirin'ny FCT?
TOSIKARATRA, ankehitriny, herinaratra, herin'ny herinaratra, matetika, tsingerin'ny adidy, hafainganam-pandehan'ny fihodinana, famirapiratana LED, loko, fandrefesana toerana, fanekena ny endri-tsoratra, fanekena lamina, fanekena feo, fandrefesana ary fifehezana ny mari-pana, fifehezana ny fandrefesana, fanaraha-maso marina, FLASH, EEPROM fandaharana amin'ny Internet sns.
2. Ny tsy fitovizan'ny TIC sy FCT：